निर्वाचनको महाभारत | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
April 29, 2017 April 29, 2017 Dishanirdesh Kanchan0Comments
यौगिक विज्ञानमा एउटा मिठो शब्द छ रेचन ९अबतजबचकष्क० प्रक्रिया, भित्र गुम्सिएर रहेका विकार फाल्ने, हास्न नपाएकोमा हास्यासन, रुन नपाएकोमा रोदन क्रन्दन आदिका माध्यमबाट शरीरलाई र अन्ततः मनलाई पनि निर्विकारको स्थितिमा पु¥याउने अन्यथा ध्यान मार्गका बन्द द्वार खुल्न असंभव रहेछ । यो किताबहरुमा पढे पनि अनुभव गर्दै जादा कति सम्म महत्वपूर्ण विषय हो भने भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा निर्वाचनको नाममा यस्तै प्रकारको रेचन प्रक्रिया चलिरहेको स्पष्ट आभाष हुदाँ सामयिक प्रसंगका रुपमा इमानदार तटस्थ नेपालीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक लागेको छ ।
अझैपनि सञ्चार माध्यमहरु २०७४ साल बैशाख ३१ को स्थानिय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगका वाणी सुनिन छोडेका छैनन् । सत्ताधारीहरुले जसरी पनि एकै पटक निर्वाचन हुन्छ भनी आम सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्दै आएका हुन् तर अप्रत्याशित रुपमा १ महिनाको समयावधि थप गरेर जेष्ठ ३१ मा दोस्रो चरणको तराई लक्षित ४ नं. प्रदेशमा हुने भनि परिमार्जन संहिताको संविधान संशोधन फाष्ट ट्रेकबाट गर्ने भनी संसदमा कानून मन्त्रीले टेबुल गरी सक्नु भएको छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले सशक्त रुपमा विरोध गरी सकेको हुनाले अब संविधान संशोधन विधेयक कसरी पारित होला ? यदि पारित भएन भने पुरानै अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ ।
यसलाई उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर समेतले घोषणा पनि गरी सकेका र केही गरी प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध जारी रहेमा पनि पारित गराई छाड्ने माओवादी केन्द्रको त्यसमा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट समय समयमा व्यक्त धारणाबाट पनि प्रष्ट पारिएको हुनाले यसको निहितार्थ के होला ? आम जिज्ञासाको प्रश्न बनेको छ । कांग्रेस राप्रपा लगायत यसको समर्थनमा रहेपनि गणितिय हिसाबले दुई तिहाई अर्थात् ३९७ सांसद पुग्ने स्थिति छैन । ६ जना अझै कम पर्छन् । त्यसलाई सत्ता पक्षले विशेष मानेको देखिदैन ।
६ जना तान्न सक्ने विश्वास देखिएको हुनाले विखण्डन दल बदल वा हृीप उल्लङ्घन गरेर पनि अपेक्षित दुई तिहाई पु¥याउने खेल तयार भएको आभाष हुदाँ यसबाट निस्कने परिणामले रेचन प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पुग्ने पनि निश्चित छ र भित्र गुम्सिएका अव्यक्त भावना र नियत बाहिर प्रकट नभई संभव नै देखिदैन । सोझो अर्थमा भन्नु पर्दा प्रतिपक्षबाट पनि अपेक्षित संख्या ल्याउन सक्ने बाहेक अर्काे विकल्प देखिदैन ।
निर्वाचनको महाभारत भित्र यस्तै विषयहरु देखिदै छन् । टिकट वितरणबाट पनि व्यापक असन्तोष टुटफुट अन्तरघातबाट प्रायःजसो सबै दलहरुमा भय व्याप्त छ । जो जे थिए त्यही रही रहन सक्ने स्थिति नहुने पनि सृजित भइरहेको देखिन्छ । केही गरी साम दाम दण्ड भेद गरेर संख्या पु¥याई हालेपनि मधेशवादीहरुको अपेक्षा पुरा होला ? संविधान संशोधनबाट निस्कने परिणामबाट निर्वाचन भए देश नै धरापमा पर्ने आशंका व्यक्त हुन लागेको छ किनभने निर्वाचन भन्दा पनि नेपालको निश्चित भुभाग दुई राष्ट्रवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छ ।
त्यो पनि स्वायत्त, आत्मनिर्णय सहितका स्वतन्त्र राज्य भनेर लुकिछिपी होइन खुलेआम व्यक्त विचार प्रवाहित भइरहेका छन् । राजेन्द्र महतोहरु मधेशमा कसैको पनि चल्न सक्तैन दल विशेषलाई त प्रवेश सम्म पनि निषेध गरी समाप्त पारिने धम्कीका भाषण तथा अपेक्षित संशोधनलाई विरोध गर्न सामथ्र्य कसैको छैन भन्ने दंभ र अहङ्कार अझ त्यसमा विभिन्न दलहरुको एकिकरणबाट जनता प्रफुल्ल भएर अरु कसैको अस्तित्व स्र्वीकादैन भन्ने अन्तरवार्ताहरुबाट नयाँ नेपाल लोकतन्त्रको विहगंभ नमुना प्रकट भएको छ ।
एक प्रकारले जातिय क्षेत्रिय द्वन्दको भयानक स्वरुप देखा परिरहेको छ । यसबाट निर्वाचन होइन अधिनायकवादको पृष्ठभुमि तयार भईरहेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशंका अझै कायम छ । निर्वाचन भनेको समयावधि भित्र सरकार परिवर्तनका साथै समिकरणको स्वरुपमा समेत अकल्पनीय दृश्य परिलक्षित भइरहेका छन् । निर्वाचन वास्तवमा नै डरलाग्दो सुरुङ भित्र प्रवेश गरी रहेको छ । सुरक्षा संयन्त्रमा खलबलि मच्चिएको छ । अदालति मुद्दाको परिणामबाट पनि नसोचेको स्थिति निम्ति सक्ने यथेष्ठ आधार छन् ।
जताततै आशंका, त्रासले गृहयुद्धको आधारशिला खडा भइरहेको त होइन ? गुट उपगुट सत्ताको हानथाप अझ त्यसमा देशको बजेट पनि निर्वाचन कै बीचमा बाध्यकारी भएर आउन लागेको छ । यी समग्र परिस्थिति हेर्दा निर्वाचन आचारसंहिता धराशायी भइरहेको र सीमाङ्कन हेरफेर क्षेत्रहरुमा बृद्धि आदि विविध कारणले निर्वाचनको शब्दावलि महाभारतको उद्घोष गर्न झै पक्ष विपक्ष विविध रणनीतिले लागु नै नभएको संविधान क्षत विक्षत पारिएको स्थितिमा नवीन युग प्रवेश हुने स्पष्ट संकेत परिलक्षित भइरहेका छन् । टिकट हानथापका लागि धेरै प्रयास नगर्दा कसो होला ?
← निजि विद्यालय एक उत्पादनमुखी संस्था हो
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको फैसला जनताले गर्नुपर्छ →